5 Jimicsiyada Yoga oo wanaagsan iyo Yoga oo loogu talagalay Xumada Ilkaha
5 jimicsi yoga ah oo loogu talagalay xanuunka sinta
28 / 06 / 2016 /0 Comments/i hip, tayada Articles, Jimicsiga iyo Jimicsiga, iskala Layliyo/av waxyeelladayda
5 jimicsi oo yoga ah oo loogu talagalay xanuunka sinta
Miyaa miskahaagu ku dhibay? Halkan waxaa ah jimicsiyo 5 Yoga ah oo kaa caawin kara inaad kordhiso dhaqdhaqaaqa sinta iyo yareynta xanuunka sinta. Xor baad u tahay inaad la wadaagto qof qaba dhibaatooyinka miskaha.
Jimicsiyada yoga iyo yoga waxay waxtar yeelan karaan markay tahay nasashada muruqyada adag iyo murqaha. Intooda badan badiyaa nolosheenna wax aad u badan ayaa waxay sababtaa muruqyada dhabarka, sinta, dhabarka bowdooyinka iyo kursiga inay aad u adkaadaan. Fidinta joogtada ahi waxay noqon kartaa cabiraad wanaagsan oo looga hortago murqaha adkaanta iyo kala goysyada adag. Waxaan kugula talineynaa in laylisyadaas si wada jir ah loo sameeyo jimicsiyadaan xoogga ah ee sinta awoodda ugu badan.
1. Anjaneyasana (Natiijooyin hoose)
Mawqifkan yoga wuxuu furayaa booska sinta, wuxuu kala bixinayaa muruqyada wuxuuna ku dhaqaajiyaa dhabarka hoose qaab wanaagsan Ku bilow meel fidsan ka dibna hoos u dhig lugtaada dambe si tartiib tartiib ah sariirta layliga. Xusuusnow in jilibku uusan dhaafin karin caarada suulasha. Hubso inaad boos dhexdhexaad ah ku leedahay dhabarka hoose ka dibna qaado 4 ilaa 10 neefsasho qoto dheer. Ku celi 4-5 xirmo ama inta jeer ee aad dareento inay lagama maarmaan tahay.
2. Ananda Balasana (Booska Yoga ee Cajirka Gudaha)
Meel yoga ah oo ku fidsan gudaha bowdooyinka - muruqyada aan wada ognahay inay adkaan karto in si wanaagsan loo kala bixiyo. Way fidsan tahay waxayna siinaysaa dabacsanaan badan sinta iyo kursiga. Ku jiifso sariir jimicsi oo jilbahaaga u laabo dhinaca laabta - ka dibna gacmahaaga saar cagahaaga dushiisa oo si tartiib ah u soo jiid illaa aad ka dareento inay fidsan tahay. Ku hay 30 ilbiriqsi oo ku celi xirmooyinka 3-4. Kala duwanaanshaha horumarka ayaa ah inuu gacmahaaga ku qabsado gudaha cagahaaga.
Layligan oo Sankrit loogu yeero Vrksasana, waxaa lagu turjumi karaa af -noorwiiji ahaan “geed -istaag”, marka aad fiiriso booska waxaad fahmi doontaa sababta. Waxay siisaa dheelitir iyo xoog labadaba lugaha, miskaha iyo dhabarka - jimicsi ka hortag dhaawac oo wanaagsan oo loogu talagalay waayeelka iyo dhallaankaba. Marka hore ku istaag laba lugood ka dibna si tartiib ah hal lug kor ugu soo jiid gudaha gudaha lugta ka soo horjeeda - dheelitir oo raadso booska saxda ah oo u oggolow gacmahaagu inay u toogan sida laamaha geedka. Ku hay booska 1-3 daqiiqo. Ku celi labada dhinac in ka badan 3-4 qaybood.
4. Meel jilicsan
Xoogaa aad u baahan, laakiin wax ku ool ah, jimicsi aan lagu talineynin kuwa leh ogaanshaha jilibka. Jilbahaaga ku istaag oo jirkaaga horay ha u soo dhicin adoo gacmaha fidsan. Si tartiib ah u kordhi masaafada u dhexeysa jilbaha illaa aad ka heleyso kala bixin wanaagsan muruqyada bowdada, gaar ahaan gudaha. Anqawgu waa inuu la jaanqaadaa jilbaha oo uusan si aad ah u soo bixin, maxaa yeelay tani waxay siin kartaa cadaadis aan loo baahnayn jilbaha. Lagu sameeyay in ka badan 3-4 nooc oo soconaya 30 ilbiriqsi.
5. "Kapotasana" (Duestillingen)
Booska qoolleydu wuxuu noqon karaa dalbanaya bilowga ah, maadaama ay ubaahantahay inaad horey u leedahay xoogaa dabacsanaanta misigta iyo jilibka. Sababta ay waxtar u leedahay ayaa ah in ay dhab ahaantii fidiso muruqyada ku wareegsan sinta iyo miskaha laabatada. Ku hay booska 5 illaa 10 neefsasho oo qoto dheer, illaa 30-45 ilbiriqsi, ka dib u wareeg dhinaca kale oo ku celi sidii loogu baahdo.
Kuwani waa jimicsiyo yoga wanaagsan oo ay habboon tahay in la sameeyo maalin kasta si ugu badnaan saameyn loogu yeesho - laakiin waxaan ognahay in maalmaha shaqada ee xiisaha badan aysan had iyo jeer oggolaan tan, sidaas darteed waxaan aqbalaan xitaa haddii aad taas sameyso maalin kasta oo kale.
Dhammaan adiga ayey kugu xidhan tahay. Raadi waxa adiga kuu shaqeynaya bilowga oo si tartiib tartiib ah u dhis laakiin hubaal inaad horay u socoto. Xusuusnow in jimicsigu u horseedi karo danqasho bilowga, maadaama aad si tartiib tartiib ah u burburinayso aagagga dhaawacan (unugyada dhaawacmay iyo unugyada nabarrada leh) oo aad ku beddesho unugyo jilicsan oo caafimaad qaba, oo shaqeynaya. Tani waxay noqon kartaa waqti qaadasho laakiin geedi socod aad u faa'iido badan. Haddii aad leedahay baaris, waxaan kaa codsaneynaa inaad weydiiso takhtarkaaga haddii jimicsiyadan ay faa'iido kuu yeelan karaan adiga - waxaa suuragal ah inaad si taxaddar leh isugu daydo naftaada. Waxaan si kale kugu dhiirigalinaynaa inaad dhaqaaqdo oo aad lugeeysid dhul adag haddii ay suurogal tahay. Waxaan sidoo kale kugu dhiirigelinaynaa inaad iska hubiso jimicsiyadaan xoogga ah ee miskaha.
Xor ayaad u tahay inaad layligaan la wadaagto saaxiibbada, saaxiibbada iyo dadka aad is garataan. Haddii aad jeclaan lahayd laylisyada loo diro dukumiinti ahaan oo leh celcelis iyo wixii lamid ah, waxaan ku weydiineynaa sida oo aad la xiriirtaa adigoo adeegsanaya bogga Facebook iyada. Haddii aad qabtid wax su'aalo ah, iska dhaaf uun nala soo xiriir ama si toos ah uga faallood mid ka mid ah maqaalladayada quseeya ee arrintaada.
PAGE xiga: - Xanuun miskaha? Waa inaad tan ogaataa!
Sidookale iskuday: - Talo Wanaagsan iyo Talaabooyin ka dhan ah ISJIAS
Maxaan sameyn karaa xitaa xanuunka miskaha?
Alaabada lagu taliyay ee xanuunka yareeya sinta
Ma ogtahay in: - Daaweynta qabow waxay yareyn kartaa xanuunka xanuunka iyo kala goysyada murqaha? Waxyaabaha kale, Biyo qabe (halkan waad ku dalban kartaa), oo ka kooban inta badan alaabada dabiiciga ah, waa badeecad caan ah. Nagala soo xiriir maanta boggayaga Facebook haddii aad u baahan tahay talooyin kale oo adiga kugu habboon.
Ma jeceshahay maqaalkeena? Ka tag qiimeynta xiddig
La wadaag LinkedIn
La wadaag emaylka
https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/Enbent-yogapositur.jpg?media=1648573622 389 750 waxyeelladayda https://usercontent.one/wp/www.vondt.net/wp-content/uploads/logo-website.png?media=1648573622 waxyeelladayda2016-06-28 07:49:422022-03-18 17:25:505 jimicsi yoga ah oo loogu talagalay xanuunka sinta
Jawaab u dhaaf
Ogaaw in aad xor in ay gacan!
Faallo u dhaaf Jooji jawaabta
Cinwaanka emailkaaga lama daabici doono. Beeraha qasabka ah waxaa lagu calaamadeeyay *
Ku keydi magacayga, iimaylkayga iyo degelkayga biraawsarkan marka xigta ee aan faallo bixiyo.
Canbaarta canqowga DAQIIQADII: Saliidda saytuunku waxay la mid tahay shaqada Ibuprofen